Bulgari - Serpenti Misteriosi Cleopatra - မြင့်မားသောရတနာအိပ်မက်
Bvlgari နာရီ နာရီနှင့် Wonders 2021
Bulgari သည်နောက်ဆုံးပေါ်ရတနာလက်ပတ်နာရီဖြစ်သော Serpenti Misteriosi Cleopatra တွင်ဒဏ္myာရီဆန်သောအီဂျစ်ဘုရင်မကြီး၏စိတ် ၀ င်စားမှုကိုဖော်ပြသည်။
Bulgari သည်ရှေးခေတ်အီဂျစ်၏ဂုဏ်အသရေကိုထင်ရှားစေသည့်မြင့်မားသောရတနာနာရီအသစ်တစ်ခုကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီးအဲလစ်ဇဘက်တေလာသည် La Dolce Vita ၏နှစ်များအတွင်းCinecittàတွင်အမည်ဝှက်အခန်းကဏ္ played မှပါဝင်ခဲ့သည်။
ဘူဂရီရီးယား။ Serpenti Misteriosi Cleopatra ပြုလုပ်ထားသော။
မြွေ၏ဂရပ်ဖစ်ကိုယ်စားပြုမှု, ၏ခိုင်မာသောသင်္ကေတ Roman Maison နှင့်သမိုင်းတွင်အကျော်ကြားဆုံးမိဖုရားတစ် ဦး ထံအပ်နှံခဲ့သည်။ ဒီဟာအသစ် Serpenti Misteriosi Cleopatra.
Bulgari Serpenti Misteriosi Cleopatra
ဒီအမြင့်ဆုံးရတနာနာရီသည်ကာတာ ၅ လုံးကျော်၊ ရှုထောင့်နှင့်ရှစ်ထောင့်ဖြတ်ဖြတ်တောက်မှု၏ရူပဗေဒ၏ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကြောင့်ဖုံးကွယ်ထားသည့်အချိန်ကိုထုတ်ဖော်ပြသသည့်အဆောင်လက်ဖွဲ့နှင့်တူ၏။
လက်ပတ်နာရီ၏ခေတ်ပြိုင်နာရီသည် Bulgari ၏ဒီဇိုင်းအစဉ်အဆက်အပေါ်တွင်မှီပြီးမြွေ၏ချိန်ခွင်များကိုအာရုံစိုက်သည်။ ၎င်းတို့ကိုတောက်ပသော၊ ချောချောမွေ့မွေ့ကျောက်မျက်ရတနာပေါင်းစပ်မှုများဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။
Bulgari Serpenti Misteriosi Cleopatra - ကျောက်မျက်ရတနာ
ဆီးနှင်းများတပ်ဆင်ထားသောစိန်များနှင့်ဝိုင်းရံထားသည့်ကျောက်တုံးကျောက်မျက် ၉ ခု၏သက်တံကိုရွေးချယ်ရန်အတွက် Bvlgari ၏မအောင်မြင်သောစတိုင်ဖြင့်ထူးခြားသောမြင့်မားသောရတနာဖန်တီးမှုကိုပြုလုပ်ထားပြီးအမြင့်ဆုံးရတနာလက်မှုအနုပညာလက်ရာများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
Serpenti Misteriosi Cleopatra - ပုံကြမ်း
ဒီဇိုင်းများကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာဆွဲဆောင်ခြင်းဖြင့်ခေတ်ပြိုင်ဒီဇိုင်းကိုမှားယွင်းပစ်ခြင်းသည်ကျောက်မျက် ၉ ခုဖြစ်သည်။ amethysts, citrines, aquamarine နှင့် rubellite, tourmalines, tanzanites နှင့်စုစုပေါင်းအလေးချိန် ၅၀ ကာရက်ရှိစိန်ပွင့်စိန် ၄၀၀၀ နှင့်လိုက်ပါသွားသည်။
Bulgari Serpenti Misteriosi Cleopatra - ၏ချမှတ်ခြင်း
ထို့အပြင်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှာဖုန်းကိုစိန်များဖြင့်တပ်ဆင်ထားပြီးမူလကကာရက် ၁၀ နီးပါးရှိသည်။
နာရီပေါင်း ၄၇၀ ကြာမြင့်သောရတနာနှင့်လက်ပတ်နာရီများကိုရောမ Maison ၏နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုကိုအရောင်များနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောထူးခြားသောရတနာနှင့်နာရီထုတ်လုပ်မှုအတွက်စေ့စပ်စွာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ရတာဟာ.
Bulgari Serpenti Misteriosi Cleopatra ။
18kt နှင်းဆီရွှေ Serpenti Misteriosi ရတနာလက်ဝတ်ရတနာလက်ပတ်နာရီကိုဆီးနှင်းဖုံးစိန်များဖြင့်အလှဆင်ထားပြီးအလှဆင်ထားသည့်အက္ခရာခြောက်လုံးဖြင့်ကျောက်တုံးများဖြင့်အလှဆင်ထားသော ၂ citrines (~ ၅,၇၀ cts၊ ၆,၁၆ cts)၊ ၂ amethysts (~ 8,2cts နှင့် ~ 5,70 cts), 6,16 aquamarine (~ 2cts), 4,85 Tourmaline Chrome (~ 6,81 cts), 1 tanzanite (~ 6,45 cts), 1 peridot (~ 4,59 cts) ။ ၂၀ မီလီမီတာ ၁၈ ကာရက်ရှိရွှေရောင်အမှုန့်သည်ကျောက်မျက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်မျက်နှာပုံသဏ္heာန်အမျိုးမျိုးရှိသောပွင့်လင်းမြင်သာသည့်ရူဘီတယ် (~ 1 cts) နောက်ကွယ်တွင်ဖုံးကွယ်ထားသည့်ကျောက်ပြားအပြည့်တပ်ဆင်ထားခြင်း။
လင်းကျောက်လှုပ်ရှားမှု, Bvlgari Bvlgari လိုဂိုနှင့်အတူစိတ်ကြိုက်နှင့်တန်ဆာဆင်။
Tags:bvlgari • နာရီ • 2021 နာရီနှင့်အံ့သြဖွယ်ရာများ
မှတ်ချက်0ခုBulgari - Serpenti Misteriosi Cleopatra"